लोडसेडिङ एपएफ वनसफ्ट कम्पनीको मोबाइल एप्लिकेसन विभागले बनाएको लोडसेडिङ एपले नेपालीको दिनचर्यालाई केही सहज बनाएको छ। समूहअनुसार बत्ती जानुभन्दा १५ मिनेटअघि सूचना दिने यो एपले दैनिकी सहज बनाएको कम्पनीका प्रमुख...
'कामदारमैत्री कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ'
संविधानसभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री हुन्। विगतमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसमेत रहेका गुरुङ आफैँ मन्त्री भएपछि व्यवसायी र कामदारको विषयमा सकारात्मक काम गर्नेमा धेरै विश्वस्त छन्।...
अघिल्लो वर्षको वैशाख १२ गते एउटा ऐतिहासिक त्रासदीको दिन थियो। जुन दिन नेपाल सम्पूर्ण रूपमा आतंकित भयो, हजारौँ मान्छेहरूको एक्कैदिनमा ज्यान गयो। एक्कैदिनमा हजारौँ मान्छे घाइते भए, हजारौँ हजार घरबासविहीन र आफन्तविहीन भए। हजारौँको चिलबिचिल भयो। शक्तिशाली भुइँचालो गएको त्यो…
जब टोलका सारा मानिसहरू बेपत्ता दौडँदै खाली चउरतिर आए, तीमध्ये धेरै रुँदै थिए। तिनीहरू सबै आत्तिएका थिए, कतिका आफन्त घरभित्रको शौचालयका ढोका खुल्न नसकेर भित्रै बन्द थिए। कति भर्याएङका रेलिङ समातेर रोइरहेका थिए।
राजनीतिक इमान र लोकतन्त्रको मर्यादा
वैशाख ११ नजिकिँदै जाँदा नागरिकमा बेग्लै प्रकारको उत्साहको सञ्चार हुन्छ। लोकतन्त्रमा निहित सौन्दर्यका कारण जनतामा उत्साह आउनु एउटा पक्ष हो। तर, यसबाट जनताले पाउनुपर्ने अधिकार र सुबिस्ता अर्को पाटो हो। लोकतन्त्र जनताका पीरमर्का समाधान गर्ने विधि भए पनि यो स्वयंले…
यस्तो लाग्छ– देशमा भाग्य र अन्धविश्वासको सुपरमार्केट नै चलिरहेको छ। आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित मान्छेहरूलाई चिकित्सकले औषधि लेखिदिएजस्तो गरी ज्योतिषहरू पुर्जीमा रत्न–पत्थर सिफारिस गरिरहेका हुन्छन्। 'सोचेको पूरा हुन्छ, दोष काटिन्छ, ग्रहशान्ति हुन्छ, धनलाभ हुन्छ' भन्ने जस्ता भ्रमको खेतीमा फसेर औँलामा पत्थरजडित…
फेसबुके साथीले पठाएको क्यान्डी क्रस खेल्ने आमन्त्रणसहितको 'नोटिफिकेसन'लाई पछ्याउँदै तपाईं पनि क्यान्डी क्रस खेल्न थाल्नुभएको त छैन ? यदि थाल्नुभएको छैन भने के फुर्सदको दिन खेल्ने योजना बनाइरहनुभएको छ ? यदि यस्तो योजना बनाउनुभएको छ भने होसियार हुनुस् । किनकि,…
यस कार्यक्रमका उद्घोषक मित्र मित्रलाल पंज्ञानी अन्तर्यामी हुनुहुन्छ क्यार। त्यसैले त उहाँलाई र सायद प्रलेसका अन्य मित्रहरूलाई लागेछ– खगेन्› संग्रौला सम्मान ग्रहण गर्न आउला र? मित्रलालजीहरूले कल्पना गर्नुभएजस्तै यसमा मेरा पनि दुविधाहरू थिए।
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको दैनिकी अचेल फेरिएको छ। उनको आफ्नो 'सेड्युल छैन', नयाँ शक्ति नेपालको 'सेड्युल'मा जहाँ पुग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। उनको लवाइ पनि फेरिएको छ। वानपिस र हाई हिलमा सजिएर हिँड्दिनन्, कुर्तासुरुवालमा पुग्छिन्। खासमा उनको भूमिका फेरिएको छ। अभिनेत्रीबाट उनी…
पत्रकारिताका गुरुका नजरमा शुक्रवार
प्रा. पी खरेलमेरो विचारमा नेपालबाट प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिकाहरूमध्ये विविधता, लेखनशैली, चित्र प्रयोगका हिसाबले शुक्रवार अब्बल पत्रिकामा पर्छ। बजारमा थुप्रै पत्रिका स्थापित भइसकेको अवस्थामा शुक्रवार प्रकाशनमा आएको थियो।